IEuropean Commission inobhejera paSignal sekutumira mameseji kune vashandi vayo | Linux Vakapindwa muropa
Signal, ndeye kumagumo-kune-kumagumo encrypted chat application iyo iri kuwedzera kugamuchirwa senzira yakachengeteka yekuchengetedza zvakavanzika zvekutaurirana pamhepo.
Uye nguva ino, European Commission ine chokwadi chekushanda kwayo sezvo ikozvino ichikurudzira kuti vashandi vayo vashandise Signal zvekutaurirana kwekunze. Danho iri chikamu chekuedza kweEU kuwedzera cyber kuchengetedza mushure mezviitiko zvepamusoro zvakavhundutsa vamiriri nevamiririri.
Kubva zviitiko zvakati wandei nezvezvigadzirwa zveFacebook zvakataurwa kwenguva yakati, Kunyangwe zvichibva mukushandisa kumwe chete kwenzvimbo yekutandarira, iyo Messenger application, WhatsApp kana zvimwe zvezvigadzirwa, Facebook iri kugara ichiunganidza data neimwe nzira.
Ndokusaka MuEurope, pasocial network mumakore achangopfuura aifanira kutarisana nematare akasiyana siyana nemakakatanwa nekuda kweizvi.
Nayo ikozvino chinangwa cheEuropean Commission ndechekuwedzera kuchengetedzeka kwekutaurirana kwako uye iwo murayiridzo wakatanga kuratidzira pamushandi wemukati mamabhodhi emeseji kutanga kwaKukadzi.
"Chiratidzo chakasarudzwa sechinhu chinokurudzirwa kutumira mameseji paruzhinji."
Muchokwadi, Signal iri muchinjika-chikuva uye yakavhurwa sosi yekutumira mameseji application inowanikwa pane Android neIOS, iyo inobvumidza kutaurirana mune yakavharidzirwa fomu.
Iko zvakare kune mutengi weWindows PC, macOS, uye Debian-based shanduro dzeLinux. Iyi desktop vhezheni yakagadzirirwa neiyo Electron fomati. Chiratidzo chinogadzirwa nesangano reOpen Whisper Systems uye chinosunungurwa pasi peGPL v3 rezinesi semahara uye yakavhurika sosi software. Iyi software yakagamuchirwa uye yakakurudzirwa nemasangano akati wandei kubvira payakaratidzwa muna2013.
Uye zvinoita sekudaro chinokonzera kurudziro iyi neEuropean Commission yekuchinjira kuSignal, imo nekuti Facebook haina chinangwa chekuchinja marongero ayo Uye hainawo chinangwa chekuzvidzora pazvinodiwa zveEuropean Union.
Aive Thierry Breton, Commissioner weEU indasitiri, uyo akatumira meseji yakaoma kuZuckerberg svondo rapfuura achiti kambani iyi inofanirwa kutevedzera mitemo yeEurope kwete neimwe nzira.
"Isu hatisi ivo vanofanirwa kujairana nekambani iyi, ikambani iyi ndiyo inofanirwa kutenderana nesu," Breton akaudza vatori venhau vakamubvunza mushure memusangano wake naZuckerberg.
European Commission haisiriyo yega yehurumende mutumbi uyo akaraira mudonzvo wake kuchinjira kuSignal.
Zvakanaka Zvita apfuura, Guardian akataura kuti bato rekuUK rakaudza nhengo dzaro dzeparamende kuti vachinje sevhisi yeWhatsApp.
Panguva iyoyo, zvaifungidzirwa kuti shanduko yakaitwa kutora mukana weSignal's asipo meseji ficha kumisa kuburitsa senge iyo yakazozivikanwa ichishandisa WhatsApp.
Nekudaro, mutauriri webato akataura kuti imhaka yekuti kuwanda kwavo kwevenguva pfupi vachangosarudzwa MP kunoreva kuti vakapfuura huwandu hwakakura hweWhatsApp.
Uye zvakare, WhatsApp yainge yashandura shanduko dzinoverengeka, idzo vazhinji vakanyunyuta sezvo chikumbiro chakatanga kurambidza maakaundi evashandisi vanoenderana ne "spam" mubasa. Kunyangwe zvichinyanya mashandisiro acho, kana ikaona kuti mameseji mazhinji ari kutumirwa, zvinokurambidza, zvichikumanikidza kuti uchinjire kuWhatsApp Bhizinesi.
Kune chikamu chayo, Signal, ine rutsigiro rweThe Guardian Project naEdward Snowden sezvavanotaura kuti Anwendung akakwana nekuda kwekupedzisira-kune-kumagumo kunyorera uye yakavhurika sosi tekinoroji.
"Nekuti yakavhurwa sosi, unogona kutarisa zviri kuitika pasi pehodhi," akadaro Preneel. Signal zvakare ine rutsigiro rweWhatsApp muvambi Brian Acton, akasiya kambani mu2017 mushure mekumhanyisa mune Facebook manejimendi.
Kubva ipapo, Acton haana kumira kuti aratidze kuputswa kweFacebook. Zvakare, kunyangwe WhatsApp tekinoroji yakavakirwa paSignal protocol (inozivikanwa seOpen Whisper Systems), haisi yakavhurika sosi.
Iwe unozopedzisira wafunga izvi zvinoratidza kutanga kwekuguma kweFacebook muEuropean Union? Kana iwe unofunga kuti pasocial network nezvigadzirwa zvacho zvinopedzisira zvave kugadziridzwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » IEuropean Commission inobhejera paSignal sekutumira mameseji kune vashandi vayo
Icho sarudzo yakanaka, asi wadii teregiramu?
Nekuti icho chigadzirwa cheRussia uye havavimbe nayo sezvo ichisangana nezvinetso zvakafanana nezve kushomeka kwekujekesa mashandisiro ayo.
Zvakaipa kuiisa iwe unoda iyo GOOGLE Play Chitoro, uye ipapo tarisa zvakavanzika zvako.